လွယ်ကူစွမ်းထက် ပီယဆေးတစ်လက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » လွယ်ကူစွမ်းထက် ပီယဆေးတစ်လက်
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Feb 5, 2012 in Education, How To.. | 23 comments
သြောင်း တစ်ရာ့ရှစ်ကွက် ဗုဒ္ဓစက်
လရောင်ဝင်းလျက် ရှင်ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ ရဟန္တာစက်
မြင့်မိုရ်တောင်ဦး မြင့်ခေါင်ကြူးလျက် မိဘစက်
ဂုဏ်ကျေးဇူး အထူးသိလျက် ဆရာ့စက်
အာခံတွင်းက ဝင်းဝင်းတောက်လျက် နဂါးစက်
အာဏာစိုးလျက် သီဟစက် …
စက်ကြီး ၁၃ ပါး ရွတ်သံကြားက ဘေးများမြင်မူ မကောင်းမူတို့ ဝေးကကြဉ်ရှောင် အောင်စေတတ်သည် မြတ်သည့်ပညာ ဆရာတည်း … ။
သြောင်းနမော ဗုဒ္ဓ နုဘာဝေန …
သြောင်းနမော ဓမ္မာ နုဘာဝေန …
သြောင်းနမော သံဃာ နုဘာဝေန …
သြောင်းနမော ဒူရေ ဒူရေ သွားဟုံဟုံ ………… ။
ဤသို့ဤနှယ် အန္တရာယ်၊ ရန်စွယ်အပေါင်းအား ဘေးသို့ ရှဲစေခြင်းငှာ စက်ကြီး ၁၃ ပါး ဂါထာ မန္တာန်ဖြင့် မောင်းထုတ် ပြီးသည့်နောက် လွယ်ကူစွမ်းထက် ပီယဆေး တစ်လက်အား မစွံတကာ့ မစွံကြကုန်သော သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မတကာ … အဲလေ … သဗ္ဗေသတ္တာ ဝေနေယျာ အပေါင်းတို့ကို သနားမေတ္တာ ဂရုဏာဖြင့် ပေးသနားပေအံ့ ။ ___ (ကွက်လပ်) လိုချင်သော်လည်း မရကြကုန်သော လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး အပေါင်းတို့ လိုက်လံ မှတ်သားကြလေကုန် ………… ။
ဆေးနည်းအတွက် လိုအပ်သည့် အမယ်များမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ မဟုတ်၊
နံပါတ် (၁) ကွမ်းရွက်တစ်ရွက်၊
နံပါတ် (၂) နှမ်းဆီစစ်စစ် တို့သာ ဖြစ်လေသည်။
မြို့ပေါ်တွင် ရောင်းချသော နှမ်းဆီစစ်စစ် များမှာ အမည်ခံသာ များ၍ တကယ့်နှမ်းဆီ စစ်စစ်ကို ရရှိရန် လိုအပ်လှပေသည်။
ဆေးနည်း ဖော်စပ်ဖို့ရန်အတွက် ပထမဆုံး ကွမ်းရွက်ပေါ်တွင် နာမည်ကို ရေးသားရပေမည်။ မိမိ၏ နာမည်ကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်။ မိမိ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမိသောသူ၏ နာမည်ကို ရေးသားရပေမည်။ ထိုသို့ ရေးပြီးသည့်နောက် ကွမ်းရွက်ကို ပြာချ၊ ပြာချ ဟူသော စကား၏ ဆိုလိုရင်းမှာ ကွမ်းရွက်ကို ပြာ ဖြစ်သည်အထိ မီးရှို့ ရမည်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်၏ (ဤကား မသိသေးသူများအတွက် စကားချပ်)။ ကွမ်းရွက်ပြာအား နှမ်းဆီစစ်စစ်ဖြင့် ရောပြီး မွှေပါ။ ပြီး ထိုမွှေထားသော ပြာအား မိမိ၏ မျက်စိ နှစ်ဖက်တွင် ကွင်း၍ မိမိ ချစ်မိသောသူအား ကြည့်ပါလေ … ။ မိမိ ချစ်မိသောသူမှာ မိမိအပေါ်တွင် ကြွေလာပေလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ မကြွေခဲ့ပါမူ အဆိုတော် Rဇာနည် ၏ ကြွေပါစေ သီချင်းအား ဟဲပါလေ (ဤကား စကားချပ်) ။
အထက်ပါ ကျွန်ုပ် သိထားသော ပီယဆေးနည်းမှာ လွယ်ကူလွန်းလှ၍ သံသယ မဖြစ်စေအပ်။ ထိုဆေးနည်းကို အသုံးပြုပြီးပါက တောက်တဲ့ ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ပီကေ ကဲ့သို့လည်းကောင်း ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ဖော်ညွှန်းထားပေ၏။ ကျွန်ုပ် ယခုဆေးနည်းအား ဖော်ပြခြင်းမှာ ဗဟုသုတ အဖြစ် ရည်ရွယ်၍ ဖော်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တစ်နည်း ရေးမိရေးရာ ရေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အမှားရှိက ခွင့်လွတ်ကြစေလိုကြောင်း …… ။
အနန္တ စကြဝဠာ မဟာရာဇာ
(ယခု ပို့စ်အတွက် မန့်၍ရအောင်၊ ဆက်၍ရအောင် ပြုလုပ်ပေးသော ဆြာပေါက်ဖော်အား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါကြောင်း)
ပီယဆေး ဆိုတော့ သများတို့ရုပ်ကဇိုးလေးတွေ စိတ်ဝင်စားသဗျာ..
ရွာထဲက ကာလသမီးလေးတွေတော့ စိန်ပေါက်ပေါက်ကို ဝေါင်ဝေါင်ရှေးပေတော့
သဂျီးတူမလဲ ဘုရားသာ မှန်မှန်ရှိခိုးပေတော့..
ပီယဆေး ရရင်စိန်ပေါက်ပေါက်တစ်ရွာလုံး ပတ်မွှေပလိုက်မယ်.
နှူးဘာတွေ မလာခင်.အရင် စီမံထားမှ
ရွာသား အထီးထဲတွင် ကျနုပ်မှလွဲ၍ မည်သူမှ မဖတ်မိပါစေနှင့်
ကျေးဇူးပါပဲ … ဆြာပေါက်ဖော်ရေ …
အခု မန့်လို့ ရပြီ … ဟိ .. ဟီ
လက်ကျန် ရှင်းတမ်းကို အောက်မှာ ဆက်လိုက်မယ် …
ဗျို့ ကိုစိန်ပေါက်ပေါက်………. ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ ကောင်မလေးတွေရှိတယ်လေဂျ……. ဘာပီယ ဆေးလိုချင်သေးတာလဲ
အိပ်မက်ဆိုးတွေ မမက်ပါရစေနဲ့ 
အပေါ်က ပို့စ်မှာ အကုန်မပါတဲ့အတွက် “ဆေးနည်း ဖော်စပ်ရန်” မှစကာ ယခု ထပ်၍ ဆက်လိုက်ပါ၏။
အနာဂါတ်ကို ထုဆစ်နေသည့် လက်တစ်စုံ
(အထက်ပါ ပို့စ်အတွက် မန့်၍ရအောင်၊ ဆက်၍ရအောင် ပြုလုပ်ပေးသော ဆြာပေါက်ဖော်အား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါကြောင်း)
လူက နဂိုထဲက ငတက်ပြားနဲ့တူနေတာ
ပြာချ၊နှမ်းဆီနဲ့ မျက်လုံးနှစ်ဘက် လူးပြီး စော်ကိုသွားကြည့်ရင် ကြောက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားမှ ဒုက္ခ
ဆန်းဒေးအလုပ်ပိတ်လို့ နှပ်နေကြတုန်း နာတစ်ယောက်ထဲ အရင်မြင်ရတာကိုက ပီယဓာတ်ခံတွေ ရှိနေလို့ နေမှာ..
ပီယဆေး လိုဘူး …
စိတ်ဝင်စားရင် ပီအမ် ပို့ပါ ….
ချက်ခြင်း ချစ်၊ တက္ကနစ်
ရှိရင်ဖြင့်၊ လိုချင်သား …
အဟီး … အနော်က ရီးစားဆကား ကြောပြီးရင် ဖြေဖြေတောင်းဖို့ ကြောက်တတ်လို့ …
ကျွန်ပ်က စိတ်ကုန်နေ၍ မယူချင်တော့ပါ။သို့သော်
ကမ်းကြီးနဲ့ ကိုရင် လိုချင်ရင် နှမ်းဆီစစ်ရှိပါကြောင်း
အိမ်း ၊ ဘိုဇာတုံး ကြည့်ရတာ နှယ်နှယ်ရရ ဂိုဏ်းက မဟုတ်ပေလောက်ဘူး ။
ဂိုဏ်းကြီးကြီး က ဘဲ ဖြစ်ရမယ် ။ ဒီလောက် အစွမ်းထက်တဲ့ ပညာတွေ ဖြန့် ဖြူးနေပုံထောက်ရင်
ဖို့ ကြောက်တယ် ဆိုတော့ ………
တောက်တဲ့ ဆိုလို့ တောက်တဲ့အော်သံတောင် မကြားရတာကြာပြီနော်…
စကားမစပ် mandalaygazettemembers@im.partych.at ကို Add ပေးကြပါလား၊ လူစုပြီးတော့ ပွါးရအောင်လို့ပါ…
ခွိ .. ခွိ .. ခွိ ..
ယနေ့ (30-7-2012) ဒီပို့စ်ကို
ရီမိသွားပါ၏ .. ကွိ .. ကွိ ..
Facebook မှာ ရှဲရင်း ဒီမှာ ကွန်မန့် ပြန်ရေးလိုက်ဒါဘာ …
( Edit လည်း လုပ်လိုက်ပါသေး၏ … )
အဲ့ဒီ ပီယဆေးဆိုဂျီးကို အားကိုးပီးတော့ ဟွင်းဟွင်းဟွင်း
တတိတာထားဂျဘေဒေါ့ မုန်တိုင်းဝင်တလို မွှေပလိုက်မယ်
ချစ်သူပါဆိုမှ ကြွေစရာလိုဦးမှာလား၆ထောင့်ရယ်.. မချစ်သူပဲ ချစ်လာအောင် ကြွေဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူးလား။
ဒါမှမဟုတ် မကြည်တဲ့သူတွေကို ကွင်းပြီး လိုက်ကြည့်ရမလား… အဟိ…
အေးလေ..အစကတည်းက မချစ်ပါဘူးဆိုမှ ကွင်းပြီး ကြည့်လိုက်ရော ပြေးရော ဖြစ်တော့မယ်…
နှမ်းဆီ စစ်စစ် ရောင်းရန်ရှိ၏ ….
တစ်ဆယ်သား – ၅၀၀၀ ဖြစ်၏ …..
စိတ်ဝင်စားသူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါ၏ .. ဟီဟိ ..
အဲဒိနှမ်းဆီ စစ်စစ် မရတာနဲ့ကွယ်….။ ဆေးမစွမ်းဘူးဖြစ်ရတော့မယ်…။ စားအုန်းဆီစစ်စစ် ဆိုတော်သေး ………..။ ဘယ်နဲ့ဘယ့်နဲ့ မရနိုင်တာမှ……. လာလာပြော ဟင်းးးးးးး